बिरपथमा भ’त्काइयो १७ छाउगोठ – सडक मिडिया
बिरपथमा भ’त्काइयो १७ छाउगोठ
सडक मिडिया February 1, 2020 0
कमलबजार नगरपालिका वडा नम्बर ६ बिरपथमा छाउगोठ भ’त्काउने अभियान तीब्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ । एक साता पहिले बाट सुरु भएको अभियानमा अहिलेसम्म १७ वटा छाउगोठ भ’त्काइएको छ । वडा सदस्य कलम बहादुर शाहीको नेतृत्वमा खटिएकाे टाेलीले उक्त छाउगोठ भ’त्काएको हो ।
वडामा संचालन गरिएको छाउ गोठ भ’त्काउने अभियानमा सबै सरोकारवालाको उत्साहजनक सहभागिता रहेको वडा सदस्य शाहले बताउनु भयो । उक्त अभियानमा अस्थायी प्रहरी पाेष्ट गैरीटाँडका इन्चार्ज भिम बहादुर बिष्ट , लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधि ,शिक्षक ,बुद्धिजीवी लगायत कर्मचारीकाे सहभागीता रहेको भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
Previous Post: अछाममा काग्रेसको कृयाशील सदस्यता बितरण सुरु
Next Post: शान्ती माबि मार्कुको बार्सिक उत्सव सप्पन्न
अर्का अभिनेताले पनि रोजे सुशान्तको बाटो…हार्दिक श्रद्धाञ्जलि ! 5,555 views
नेपालमा न्युज च्यानल बन्द भएपछि भारतीय मिडियामा खैलाबैला, कसले के लेखे? पढ्नुहोस 5,322 views